Fikarohana momba ny firaisana Tranga Reincarnation an'ny Bram Stoker | Stephen King: Mpanoratra tantara momba ny fampihorohoroana mandritra ny androm-piainana roa - fikarohana Reincarnation
Tranga Reincarnation an'ny Bram Stoker | Stephen King: Ilay mpanoratra ny tantara mampihorohoro amin'ny androm-piainana roa
Votoatin'ny: ReincarnationResearch.com Supporter
Tsindrio ny sary hanitatra
Bram stock no Irlandey mpanoratra an'i Dracula, izay navoaka tamin'ny 1897. Tamin'ity boky ity, i Stoker dia namorona indostria iray manontolo amin'ny sarimihetsika sy ny fahitalavitra izay nifantoka tamin'ny tantara vampire. Na dia tsy namorona ny karazana horohoro aza izy, Stoker dia iray amin'ireo mpanoratra horohoro malaza voalohany. Nodimandry tamin'ny 1912 izy.
Stephen King dia teraka tamin'ny 1947 tany Etazonia. Nasehony iray liana tamin'ny horohoro ny tenany ary nanomboka nanoratra tantara mampihorohoro tao amin'ny lise. Nahazo voninahitra maro izy, anisan'izany, tamin'ny fomba mahatsikaiky Bram Stoker Award ary izy dia nantsoina hoe "Mpanjakan'ny horohoro."
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana manaitra ao amin'ny maritrano fanaovan-trano an'ny Stoker sy King.
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: "Ny King of Horror" dia azo ampiasaina hamaritana an'i Bram Stoker sy Stephen King.
Fiovana amin'ny maha-olom-pirenena: Broker dia Stoker, fa Amerikana kosa i King.